Taariikh nololeedka iyo ka faa'iideysiga Aristarco de Samos | Saadaasha Shabakadda
Aristarkus oo reer Samos ah
Mid ka mid ah aqoonyahannada xisaabaadka iyo cilmiga xiddigiska ee raadkooda ku reebay raadintooda ayaa ahaa Aristarkus oo reer Samos ah. Waxay ku saabsan tahay saynisyahan soo saaray mala-awaal kacaan xilligiisii. Waana taas, waqtiyadii hore, inay qatar ahayd in laga hor yimaado waxa la dejiyey. Si kastaba ha noqotee, ninkani wuxuu ku andacooday in Qorraxdu ee aysan ahayn Dhulka, ay tahay xarunta gogosha u ah Caalamka. Wuxuu kaloo sheegay in Dunida iyo meerayaasha kaleba ay kuwareegeen qorraxda. Dabcan tani waxay kicisay buuq dadyowgii aaminsanaa in dhulku yahay udub dhexaadka koonkan iyada oo loo marayo aragtida juqraafiyeed.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxyaalaha ku saabsan Aristarkus ee Samos taariikhda xisaabta iyo cilmiga xiddigiska.
1 Shakhsi ahaan shakhsi ahaaneed
2 Wax ku biirinta ugu weyn ee Aristarco de Samos
3 Muhiim ah
Shakhsi ahaan shakhsi ahaaneed
Aristarco de Samos wuxuu ahaa qoraaga shaqada cilmiga "Baaxadda iyo fogaanta Qorraxda iyo Dayaxa." Buuggan wuxuu ku sharraxay oo tusay mid ka mid ah xisaabinta ugu saxsan ee ay jirtay waqtigaas masaafada suuragalka ah ee u dhaxeysa dhulkeenna iyo Qorraxda. Taasi, in kasta oo loo arki karo inay yihiin dhibco cirka, waxay ahaayeen qorax ka weyn intayada. Baaxadda koonka ayaa aad uga weynaa saynisyahannada waqtigaas sheeganayay.
Wuxuu dhashay 310 BC ka dib waad qiyaasi kartaa aqoonta aasaasiga ah ee waagaas jirtay. Iyada oo ay taasi jirto, Aristarkuskii reer Samos wuxuu awooday inuu sharaxo aragtiyooyinka runta u ahaa waqtigiisa. Wuxuu dhintay sanadkii 230 BC. C magaalada Alexandria, Greece. Isagu waa ninkii ugu horreeyey ee si caddaalad ah oo sax ah u baran kara masaafada u jirta meeraheenna iyo qorraxda. Wuxuu sidoo kale darsay oo cadeeyay waxa udhaxeeya Dhulka iyo Dayaxa. Wuxuu abuuray aragtida heliocentric-ka, isagoo sheegay in Qorraxdu ay tahay udub-dhexaadka Caalamka oo aysan ahayn Dhulka.
Thanks to tabarucyada saynisyahankan, qarnigii toddobaad, Nicolaus Copernicus ahaa awoodaan in ay si faahfaahsan u faahfaahin ka aragtida heliocentric. Inaad tahay nin noolaa waqti dheer kahor, macluumaad badan lagama hayo noloshiisa. Waxaa la ogyahay inuu ku dhashay dalka Giriigga uuna ahaa aqoonyahan cilmiga xiddigiska iyo xisaabta. Noloshiisa oo dhan wuxuu ku qaatay Alexandria. Waxay lahayd saameyn ka timid Masar oo sababtay in xisaabta Griiggu ay horumarto qarniyo ka hor. Waxa kale oo uu dhiiri gelin ka helay Baabuloon cilmiga xiddigiska si uu u horumariyo ka hor.
Dhinaca kale, furitaankii Bariga ee Alexander the Great, waxay gacan ka gaysatay in la yeesho fikrado isweydaarsi si weyn uga qayb qaatay fikradaha xilligaas. Tani waa macnaha Aristarkus ee Samos uu ku hormarinayay aragtida heliocentric.
Wax ku biirinta ugu weyn ee Aristarco de Samos
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee la soo kordhiyay ayaa ah inuu ku guuleystay inuu ogaado in meerayaasha ay ahaayeen kuwii ku wareegayay Qorraxda, oo ay ku jirto Dhulka. Si loo gaaro daahfurkaan, wuxuu adeegsaday macquulnimo. Dheeraad ah, Wuxuu awooday inuu qiyaaso cabirka dayaxa iyo Dhulka oo uu arko inta ay kala fog yihiin.
Wuxuu awooday inuu ogaado, in kasta oo ay xiddiguhu cirka aad uga yar yihiin, haddana waxay ahaayeen sida qorraxda oo cabbirkeedu aad u weyn yahay, laakiin masaafo aad u fog leh. Dhammaan sharaxaadyadan waxay u adeegeen sidii dhaxal ahaan Aragtida Heliocentric ee uu adeegsaday Nicolás Copernicus.
Waagii hore waxaa jiray aragtiyo fara badan oo ku saabsan koonka. Bal qiyaas haddii ay jiraan halyeeyo, sheekooyin iyo aaminaad been ah. Qaar badan oo ka mid ah aragtiyahaasi waxay lahaayeen waxyaabo badan oo khiyaali ah oo ilaahyo ah, sheekooyin, iwm. Aragtida heliocentric waxay u timid inay kacaan ka sameyso wax walba oo aan heysanay waqtigaas. Waxay ku salaysnayd mabaadi'da soo socota:
Dhammaan meydadka samaawiga ah kuma rogrogaan hal dhibic.
Bartamaha Dhulka waa xudunta dayaxa. Tan macnaheedu waxa weeye in wareegga dayaxu ku wareegsan yahay meeraheenna.
Dhammaan meerayaasha koonkan (loo yaqaan meerayaasha) waxay ku meeraystaan ​​qorraxda qorraxduna waa xiddigta go’an ee bartamaha koonkan.
Masaafada udhaxeysa Dhulka iyo Qorraxda ayaa ah kaliya jajab yar marka la barbardhigo masaafada u dhexeysa xiddigaha kale.
Dhulku ma aha wax kale oo waa meeraha ku wareegsan Qorraxda oo leh wax ka badan hal dhaqdhaqaaq.
Xiddigaha waa kuwo go'an oo aan la dhaqaajin karin. Wareegga Dhulku waa waxa ka dhigaya inay u muuqato inay socdaan.
Dhaqdhaqaaqa wareegga dhulka ee ku wareegsan Qorraxda ayaa meerayaasha kale u muuqda inay dib u noqonayaan.
Laga soo bilaabo dhamaan qodobadii la aasaasay ee aragtida heliocentric, xog gaar ah ayaa la ururin karaa si loo helo shaqo aad u horumarsan oo faahfaahsan sanadka 1532. Sannadkan ayaa loogu yeeray "Kacaannada qaybaha samada." Shaqadan 7da doodood ee ugu muhiimsan aragtida ayaa la soo uruuriyay iyo qaab faahfaahsan oo leh xisaabinta muujineysa dood kasta.
Aristarco de Samos wuxuu leeyahay shaqooyin kale oo loo yaqaan "Qiyaasaha iyo masaafada qorraxda iyo dayaxa" iyo mid kale "Kacaannada qaybaha samada". In kasta oo aanu ahayn qof leh weedho taariikhda ku gala taariikhda, haddana waxa uu leeyahay mid lagu yaqaanno buugaag qadiimi ah oo leh waxyaalahan soo socda: Ahaanshuhu waa, jiritaanku maahan.
Muhiimadda ninkani wuxuu ku jiraa xaqiiqda ah inuu isagu isagu ahaa kii ugu horreeyay ee dejiya aragtida heliocentric, wax aad u horumarsan waqtigiisa. Wuxuu garwaaqsaday in Dhulku uu sameeyay kacdoon dhammaystiran oo ku wareegsan Qorraxda oo uu socday hal sano. Intaa waxaa dheer, waxay ku guuleysatay inay ogaato meeraheenna inta u dhexeysa Venus iyo Mars. Wuxuu ku andacooday in xiddiguhu masaafo aan fogayn oo qorraxda ka fog oo ay go'an yihiin.
Dhamaan daahfurkaas waxaa laga dhaxlay fikradda ah in Dhulku uusan ahayn udub-dhexaadka koonka, laakiin inuu yahay Qorraxda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto Aristarco de Samos.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Aristarkus oo reer Samos ah
Qaanso roobaad dabka